I-Networking 101 - Ngubani odale i-Intanethi?
Internet kunye neNethiwekhi Ezisiseko
Ngubani odale i-Intanethi?
Ixesha le- intanethi namhlanje libhekiselele kumnatha wehlabathi jikelele weekhomputha ze- intanethi eziqhuba iProsoft Protocol . I-Intanethi isekela uluntu lweWWW kunye neenkqubo ezininzi zeenkqubo zesoftware zabaxhasi / iinkonzo zeseva. I-teknoloji ye-Intanethi isekela ezininzi ii- intanethi zamashishini abucala kunye nee-LAN zasekhaya zangasese.
Ukuphuhliswa kobuchwephesha obuba yi-intanethi kwathatha amashumi eminyaka edlulileyo Igama elithi "Intanethi" liqale laqulunqwa ngawo-1970. Ngaloo xesha, kuphela iziqalo ezincinane kakhulu zokunxibelelana kwenethiwekhi yomhlaba wonke. Kuwo onke ama-1970, kuma-1980 nakwa-1990, inani elincinci lamanani e-US eguqukile, lidibanise, okanye lichithekile, ekugqibeleni lahlanganiswa neeprojekthi zee-intanethi zamazwe ngamazwe ukwenza i-Intanethi yehlabathi. Ngundoqo phakathi kwezi
I-ARPANET - eyenziwe ngemali evela kwiSebe lezoKhuseleko lase-United States, i-Advanced Advanced Projects Agency Network yaphayona ukuphuhliswa kwangaphambili kwamanethiwekhi okuguqula iipakethe . Ukusebenza kwi-ARPANET yaqala ngo-1969 kwaye yaqhubeka kwada kwade kwavalwa umnxibelelwano ngo-1990. Abantu abaziwayo ababandakanyekayo kwi-ARPANET baquka uLeonard Kleinrock, onokuba ngumntu wokuqala kwi-intanethi ukuba uthumele umyalezo ongekho mthethweni.
I-BITNET - ngenxa yokuba ikhona i-NETwork yenziwa ngamanyunivesithi amabini e-US kwaye kamva yahlanganiswa nabanye. I-BITNET isebenze ngokukhethekileyo ngokuqhagamshelana nokudibanisa kwaye yayisebenza ukususela ngo-1981 ukuya ku-1996.
I-CSNET - i-US National Science Foundation yasungula i-Computer Science NETwork ngo-1981 ukuxhasa uphando lweyunivesithi. I-CSNET isebenza ngo-1991.
Uphuhliso lwe- World Wide Web (WWW) inxalenye ye-intanethi yenzeka kamva, nangona abantu abaninzi becinga ukuba oku kudibanisa nokudala i-intanethi ngokwayo. Ukuba ngumntu oyintloko ohambelana nokudalwa kweWWW, uTim Berners-Lee ngamanye amaxesha ufumana i-credit njenge-inventor ye-Intanethi ngesi sizathu.
Abadali be-Internet Technologies
Isishwankathelo, akukho mntu omnye okanye umbutho odale i-Intanethi yanamhlanje, kuquka uAl Gore, uLyndon Johnson, okanye omnye umntu. Kunoko, abantu abaninzi baphuhlise ubuchwepheshe obuphambili obunokukhula kamva baba yi-Intanethi.
I-imeyile - Ede ngaphambi kweWebhu yeWebhu yehlabathi, i-imeyile yindlela ehamba phambili yokunxibelelana kwikhompyutha. URay Tomlinson waqulunqwa ngowe-1971 inkqubo yokuqala ye-imeyili eyasebenza kwi-Intanethi yokuqala.
I-Ethernet - Itheknoloji yokunxibelelana ngokomzimba ephantsi kwe-Intanethi, i- Ethernet yenziwe nguRobert Metcalfe noDavid Boggs ngo-1973.
I-TCP / IP- Ngo-Meyi, 1974, i-Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) yashicilela iphepha elibizwa ngokuthi "Iprotocol ye-Packet Network Interconnection." Ababhali bephepha - uVinton Cerf noRobert Kahn - bachaza inkqubo ebizwa ngokuba yi- TCP edibanisa iinkonzo zombini kunye noxhumano-nkonzo. Abazange bazi ukuba ngelo xesha, kodwa umgaqo-nkqubo owawuqalile wawuza kuthiwa yiTCP / IP -inkqubo ye-intanethi yolawulo lwe-Intanethi. Indima ebalulekileyo yeTCP / IP kumanethiwekhi namhlanje ikhokelela abantu abaninzi ukuba bahlanganise uCert noKahn njengabaqambi be-Intanethi.
Ubume bemiSebenzi yoNxibelelwano lweDividential Services (ISDN)
Indlela yokulanda i-Torrents
IiNkonzo zeeNkonzo zeeNkonzo zamaHlabathi kunye nakwi-DNS
Iingxaki ezingenazintambo - Izibonakaliso eziLahlayo kunye nezixhamli zendawo
I-DNS Caching kunye nendlela Eyenza I-Intanethi Yilunge ngakumbi
Inkcazo nenjongo ye-Firewall yeNethiwekhi
Iyini Intambo ye-PlayStation (PSN)?
Isingeniso kwiiNkonzo zeInternet ezingenantambo
Yintoni eyiyo 'iTelnet'? Yintoni iTelnet Enokuyenza?
Indlela yokuLondoloza ulwazi loQhagamshelwano oluvela kwi-iPhone Mail
Uhlolo lwe-RBI Baseball 2016 (XONE)
Indlela yokusebenzisa i-GROWLr ye-iPhone
3 I-Free Simahla kunye neMithombo evulekileyo Ezinye iindlela zokuPhucula
Ixesha lokusebenzisa i-Spot Colors okanye i-Colors Process okanye zombini
Isikhokelo seNyathelo-ngeNyathelo-ntlawulo yokuTshintshiselwa kwedatha kwiNintendo 3DS
Ukusebenzisa i-GIMP Foreground Khetha isixhobo
Konke malunga nekhamera ye-iPod Ikhamera
Indlela elula yokuBumba iThebhile usebenzisa iCSS
Ukuhlaziywa kwezicelo zeBlupon
Khuphela iJack kwi-Android Devices
Indlela yokusebenzisa i-Safari Extensions kwi-iPhone okanye kwi-iPod touch
Iingqungquthela zeRedstone - Qaphela i-Block Songs
Isizukulwana sesi-3 sePod nano Review
IMececraft PC Controls
I-BlazBlue: I-Chrono Phantasma EXTEND Review
Indlela yokwakha i-iPhone efikelelekayo ye-Pet Cam
I-RFID - Ukwaziswa koLwazi lweFrequency Frequency
Ukusebenzisa ukucatshungulwa kwangaphambili kunye neMbali Yemibala kwi-Web Design
I-Best Nintendo Switch Accessories ukuthenga ngo-2018